🥇 ▷ Diyaaraddaan ayaa iibsatay 15,000 iPhone XR oo loogu talagay shaqaalaheeda ✅
Diyaaraddaan ayaa iibsatay 15,000 iPhone XR oo loogu talagay shaqaalaheeda
Dhowr bilood ka hor waxaan fursad u helnay inaan marka hore ogaano muhiimadda ay leedahay ipadka duullimaadyada ganacsiga, marka Taliyaha Paco López ayaa na siiyay wareysi oo ay ku sharaxday sida ay wax badan uga tarayso howlaha joogtada ah. Ma seegtay Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso, lama khasaarin.
Maanta waxaan ognahay hawlgal ganacsi oo aan ugu yeeri karno “duullimaadyo aad u sareeya”, maadaama shirkadda diyaaradaha ee British Airways ay heshiis la gaartay shirkadda Apple ee iibsashada 15,000 iPhone XR shaqaalaheeda. Ujeeddada ayaa cad, fududeeyo khibrada marinka.
Way ku xiisi kartaa | Wareega cusub ee iPhone 11 wararka xanta ah dhawr toddobaad kadib soo bandhigistiisa: Dallaca USB-C?
Sababta loo iibsaday
IPhone XR wuxuu muujinta weyn ka muujiyay Cupertino ee 2018. Loogu talagalay qalab kale, waxay doorkeeda ku laheyd guusha iibka dhabta ah. Shaashad cabir aan hore loo arag, 6.1 inji, kamarad kacaan iyo 6 midab oo aad ka doorato, Wuxuu u dhaqmay si aad u wanaagsan wuxuuna ku guuleystey nimcadii isticmaaleyaasha.
Qalabkan, oo ay iibsatay shirkadda British Airways ee shaqaalaheeda, waxaa lagu rakibi doonaa codsiyada caadiga ah si loo wanaajiyo khibradda inta lagu jiro duulimaadka. Waxaa loo adeegsan doonaa si loo helo macluumaadka macaamiisha, oo ay ku jiraan duulimaadyadii hore ee horey loo sameeyay iyo waxyaabaha doorbidida cuntada, taas oo u oggolaaneysa dareenka shakhsiyadeed iyo adeegga oo la wanaajiyey. Bradley Smith, oo ah 27 jir shaqaale u ah shirkadda diyaaradaha ee British Airways, ayaa tixraacay habka uu aaladda u shaqeynayo Waa caddayn waxtar leh in la daboolo baahiyaha macaamiisha.
Dhawaan, markii macmiilku ogaaday inuu iloobey inuu dalbo cunno qaas ah, runti aad ayuu ula yaabay markii aan si dhaqso leh taleefoonka u galey, u gartay ba.com oo aan dalbaday cunno safarkiisa soo laabashada, dhammaantood daqiiqado gudahood bartamaha duulimaadka
Iibso iPhone XR
Qorshahan ayaa qayb ka ah casriyeynta ay shirkado badan fulinayaan. United Airlines ayaa ka mid ahayd kuwii ugu horreeyay ee la beddelo buugaagta duullimaadka culus 11,000 iPads sanadka 2011. Isla diyaaradda ayaa qalabeysay in ka badan 23,000 oo duuliyeyaal duulimaad ah oo leh cutubyo iPhone 6 Plus ah si ay wax uga qabtaan macaamilidda dusha sare iyo eegista dukumiintiyada gudaha ah.